Boqornimo Waxaa Xiga Labadan Shuruudood | RUUG-CADDAA
Gasiirad ku taalay badweyn ayaa waxa sharci u ahaa in qofkii isu soo sharaxa boqornnimadeeda ay horyaalaan laba qodob ama laba shardi.
1.Muddada xukunku waa 4 sano oo aan la kordhin karin.
2.Afarta sano markay dhammaadaan Boqorka waxaa loo masaafurinayaa Gasiirad kale oo aan cidi ku noolayn, ayna ku dhex nool yihiin bahalo dadka cuna.
Waxyaalaha la yaabka ahaa dadka is qoray way badnaayeen ee doonayey in ay halaagsamaan xukun jacayl awgii, dadkaa isa soo sharaxay qof waliba wuxuu ku hamiyey afar sano in uu raaxaysto wuxuu doono sameeyo, hantidaa uu helayo iyo dadkaa u shaqaynaya , hantida ay dadku sameeyaan boqorkaa afartaa sano ku loofara, wax horumar ahna uma sameeyo dadka boqorkasta oo xukunka qabtaa.
Muddo ka dib ayaa dadka Xukunka isu soo sharaxay waxaa ku jiray nin dhaliyaro ah, tartankii ayuu ku guulaystay, waxaa lagu yidhi saw kama dharagsinid afar sano ka dib waxa ku sugaya iyo shuruudaha xukunkan uu lee yahay, wuxuu yidhi waan ogahay labada shuruudood ee xukunkan daba socda.
Xaflad balaadhan ayaa loo sameeyey, xukunkiina waa lagu wareejiyey, dadkii waxay la yaabeen sida uu ugu faraxsan yahay oo aanu u murugaysnayn sida kuwii ka horeeyey Xukunkiisii, wuxuu noqday mid ka duwan kuwii ka horeeyey, kuwii ka horeeyey hantida bulshad ayey ku raaxaysan jireen, waxayna aaminsanayeen in ay afar sano ka dib soconayaan, wuxuu sameeyey bogorkii dhalinyarada ahaa in uu afartii sano si daacad ah u shaqeeyo oo bulshadii waxqabad u muujiyo, Gasiiradii bahala galeenka ahaydna wuxuu markiiba ku bilaabay isaga oo shaqadii ugu horaysay ka dhigtay in uu ciidan u diro oo bahaladii ka dabar gooyo, muddo ka dibna dadkii uu ugu jeclaa u raray guryana ka dhisay.
Wuxuu maankiisa markiiba galiyey in uu hawlaha ugu khatarsan wax ka qabto taas oo ahayd in uu naftiisa iyo ta dadkiisaba badbaadiyo, isaga oo Yool iyo hadaf leh ayuu wiilkii dhalinyarada ahaa xukunka hungureeyey oo uu ka soo dhalaalay.
Maanta way jiraan rag hanku u geeyo in ay doonaan in ay bulsho hoggaaniyaan, wayse adag tahay qof yimaada isaga oo Yool xanbaarsan, madaxdii dunida hadafka xanbaarsanayd dhammaantood way wada guulaysteen, hadaadse aragtid xubin mudadii ugu horaysayba kaga dhammaatay halkuu taagnaa markii hore ayaan han ku jirin.
« Dhaliisha Deni iyo Dhoola cadeynta Farmaajo iyo Khayre maxaa ka dhalanka kara?.
Cabsi ka dhalatay nin cunsuri caddaan ah oo u sahan tagay masaajid Soomaali leedahay »